Jose Mourinho Oo Ku Eedeeyay Pep Guardiola & Gareth - Axadle | Wararka Africa
By Balaleti	 On Nov 20, 2020
Jose Mourinho ayaa ku baaqay Gareth Southgate inuu cadeeyo tababarayaasha kooxaha ee cadaadiska ku saaraya inaan ciyaartoydooda laga reebo xulka England.
Tababare Tottenham Jose Mourinho aya sheegay inuu hubo in Raheem Sterling uu ciyaari doono kulanka Manchester City ay berri oo Sabti ah booqaneyso White Hart Lane inkastoo dhaawac ahaan looga soo saaray xulka England.
Sterling ayaa ku biiray xulka England laakiin ma uusan dheeli labadii kulan ee Republic of Ireland iyo Belgium sidoo kalena wuxuu ku soo laabtay kooxdiisa ka hor kulankii ay England la ciyaartay Iceland.
“Dabcan dhamaanteen waan ognahay in Sterling uu dheeli doono” ayuu yiri Mourinho ka hor kulanka uu ka horimaanayo City.
“Markii Eric Dier uu ka soo baxay xulka England isagoo dhaawac ah bishii la soo dhaafay, labo kulan ma uusan u dheelin Tottenham.
“Ma uusan ciyaarin kulankii Premier League iyo kulankii Europa League, wuxuu u baahnaa labo isbuuc uu ku soo kabsado. Raheem berri wuu ciyaari doonaa.
“Waxaan akhriyay, mana u maleynayo inaan qaldanahay inay jiraan tababarayaasha qaar ee kooxaha inay cadaadis ku saaraan ciyaartoyda inaysan u dheelin xulkooda qaranka.
“Waxaan jeclaan lahaa inuu sheego kuwa cadaadiska saraaya. Waxaan jeclaan lahaa inuu sheego tababarayaasha ciyaartoyda ku cadaadinaya inaysan dheelin. Waxaan jeclaan lahaa inuu sheego tababarayaasha uu taleefanka kala hadlo.”
40 Methods to Get well From Vacation Consuming